Ukunyuka kweNtengiso yezeNtlalontle kunye neeNdawo eziShukumayo | Martech Zone
Ukunyuka kweNtengiso yezeNtlalontle kunye neeNtengiso zeMveli
NgoLwesithathu, nge-15 kaJanuwari 2014 UKelsey Cox
Ngokwanda okuthandwayo kwee-smartphones, abantu abaninzi basebenzisa izixhobo zabo eziphathwayo ukujonga iiakhawunti zabo kunasezidesktops zabo. Abathengisi abakhaliphileyo basebenzisa olu tshintsho ngokwandisa inkcitho yabo kwintengiso eshukumayo, kunye nokudibanisa iintengiso zabo ngaphandle komthungo kuluntu lwabo bajolise kubo kunye nentengiso yemveli.
E-US kunyaka ophelileyo, ngaphezulu kwe- $ 4.6 yezigidigidi ezichithwe kwintengiso yemidiya yoluntu, i-35% yayo yayiyintengiso yemveli yoluntu. Kuqikelelwa ukuba ngo-2017, eli nani liza kunyuka liye kufikelela kwi-11 yezigidigidi zeedola, kunye nentengiso yemveli yoluntu equka i-58% yenkcitho. Kwixesha elizayo elingekude, i-66% yee-arhente, kunye ne-65% yabathengisi, zithe zathi ngandlela ithile okanye kunokwenzeka ukuba bachithe kwintengiso yemveli kwisiqingatha sesibini sonyaka.
Kwi-2014, abathengisi kunye neearhente ziya kuthi zitshintshe inkcitho yazo kwintengiso kumajelo eendaba. Uninzi luya kwandisa inkcitho kwimithombo yeendaba ephathekayo, kwimidiya yoluntu, nakwintengiso yedijithali, ngelixa intambo, usasazo, imagazini, kunye namaphephandaba esizwe aya kubona ukuhla okuphezulu
Phew, yidatha enzulu leyo, eh? Ngethamsanqa, LinkedIn wophula la manani kunye noqikelelo phantsi kokubonakalayo okusebenzayo apha ngezantsi. Njengoko usenza uhlengahlengiso kuhlahlo-lwabiwo mali lonyaka, qiniseka ukuba uyaluthathela ingqalelo uqikelelo kunye namaqhinga.
tags: intengisoIinkcukachakwi-infographicintengiso yeselulaUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethibomthonyamaintengiso yemveliintengiso yoluntuSocial Media Marketing
Okt 30, 2017 ngexesha 2:37 AM
Zeziphi iintlobo zeendaba zosasazo lweNtlalontle ezisehlabathini?